Haweenka shaqada | khayraadka Career ka USAHello ah | USAHello
Ku dhawaad ​​kala badh shaqaalaha ee USA ka kooban yahay dumarka. Laakiin haweenka shaqada waxay yeelan karaan dhibaato. Waxaa muhiim ah in ay u diyaar garoobaan arimo muhiim ah qaar ka mid ah. Baro waxa la sameeyo oo ku saabsan farqiga mushaharka, shaqada Mosscare, faraxumeynta iyo takoorka uurka.
Ragga lacag badan oo la dalacsiiyay inta badan haweenka shaqada. Waxaa jira maamulayaal yar iyo madaxweyne ku jira dumarka. Of hogaanka 500 shirkadaha ee dalka Mareykanka, oo keliya 5 boqolkiiba ka mid ah madaxda ka yihiin haween.
farqiga mushaar ee haweenka shaqada
farqiga mushaar A jira farqi u dhexeeya sida rag badan iyo dumar ka dhigi. Haweenka shaqada waxaa inta badan ku bixisay oo ku saabsan 20% in ka yar ragga. Waxay inta badan lacag ka yar shaqada isla samaynaya. farqiga mushaar A jira, maxaa yeelay,:
nin More ka shaqeeyaan shaqooyin sare bixinta, sida daawada iyo sharciga
Haweenka mararka qaar u leeyihiin in ay shaqo stop in ay qaataan daryeelka carruurta
Haweenka shaqada waa yar tahay in ay weydiiso gudida
Daawo video ah oo ku saabsan farqiga mushaharka
Maxaad samayn kartaa oo ku saabsan farqiga mushaharka
Waayo, shaqooyinka xirfadeed, waxaad codsan kartaa in lacag dheeraad ah marka aad soo kiraystay. Waxa kale oo aad codsan kartaa in ka badan marka aad dareento in aad u mudan yihiin dalacaad.
Maareeyayaasha qabaa waxaa laga yaabaa in dumarka ee goobta shaqada ma aha sida wanaagsan sida kuwa dadka. Si kastaba ha ahaatee, iyagu ma ay odhan kara ama xitaa oga. Haddii aad aragto farqi weyn mushaharka meesha aad ka shaqeysid, la hadal maamulaha ama Waaxda Resources Human. Haddii aad tahay maamule, hadal hoggaamiyayaasha kale ee shaqo. La hadal ah oo ku saabsan hubinta in haweenka shaqada leeyihiin fursado isku mid ah dalacsiinta iyo shaqaalaynta. Soo jeedi ah tababar eexda miyir. Noocan ah macalimiinta tababarka qof kasta dawayn si la mid ah.
Xaqiraada hab ragga iyo dumarka loola dhaqmo si ka duwan. Waxay ku dhici kartaa qof, laakiin sida caadiga ah, waxaa loola jeedaa in qof dumar ah oo shaqada la dhaqmo si xun a.
Tusaalooyinka shaqada Mosscare
Ma la dalacsiiyay maxaa yeelay, waxaad tahay qof dumar ah
Ragga aan daynin aad dhammeysato hadlayay kulamada
Lagu bixiyey magacyadii sida "malab" iyo "gabar" by aad Tababaraha kooxda
Maxaad samayn kartaa oo ku saabsan shaqada Mosscare
Haddaad awoodid, la hadal qofka aad dhibtaada. U sheeg in aad tahay raaxo iyo rabto inay joojiyaan. Waxay maqli laga yaabaa oo ay joojiyaan waxa ay samaynayaan ama leh. Haddii ay maqli waayaan ama aad ka baqaysid la hadalka iyaga, u sheeg Tababaraha kooxda. Shirkadda kasta waxa uu si ka duwan si ay u joojiyaan ama ciqaabi shaqada Mosscare. U badan tahay, Tababaraha aad sheegi doonaa waaxda khayraadka aadanaha (sidoo kale loo yaqaan HR). Waxay kaala hadli doona in qofka xaqiraad qabka iyo aad waxaa ku jiri kara. Haddii Tababaraha waa faquuqaya ka mid ah, si toos ah u tagaan HR.
faraxumeynta galmada waa dareenka kasta, afka, ama ficil jirka la xariiro in aadan samayn sida. faraxumeynta galmada qof marna waa okay. Dumarka inta badan la kulmaan kadeedka galmada rag. faraxumeynta galmada waa sharci daro.
Tusaalooyinka dhibaataynta galmada
Comments ku saabsan sida aad u eegto in ka dhigi aad raaxo
Ku saabsan in aadan samayn sida, oo ay ku jiraan hugging
Wadaagista sawiro ama videos dadka samaynaya falalka galmada
Maxaad samayn kartaa oo ku saabsan faraxumeynta galmada
Raac habka la mid ah sida shaqada Mosscare. La hadal qof ka dibna aad Tababaraha ama shaqaalaha waaxda. faraxumeynta galmada ee haweenka shaqada waa dhibaato halis ah. khayraadka Human go'aansan karaan inay ku ciqaabi qofka aad handadaad. Qofka la rasaas laga yaabaa. Haddii shirkadda uusan kaa caawin, laga yaabaa in aad u baahan tahay si aad u hesho qareen.
takoorka Uurka hab daaweynta qof dumar ah oo kala duwan sababta oo ah iyada oo uurka ama dhalmada. takoorka Uurka ma aha sharci in shirkadaha leh 15 shaqaalaha ama ka badan.
Tusaalooyinka takoorka uurka
Ku khasabka qof dumar ah oo uur leh in ay qaataan waqti dheeraad ah off markaas iyadu doonayo
Cayrin qof ku listo caanaha naaska ee xafiiska oo aan qaadashada meel gaarka ah ku listo
Aan ka fiirsaneysa inay qof dumar ah oo uur leh oo kor loogu a
Maxaad samayn kartaa oo ku saabsan takoorka uurka
Haddii shaqo-aad aadan bixin meel ku listo caanaha naaska, weydii in ay sidaa sameeyaan. Haddii aysan sidaas ahayn, hadal coworker ah oo aad ku kalsoon tahay. Haddii ay leeyihiin xafiis u gaar ah, weydii haddii aad halkaas lisidda karaa. Goobaha shaqada intooda badan waxay bixiyaan saddex bilood off for uurka. Haddii aad rabto in aad dib ugu soo laabto shaqada iyo lagugu khasbo inaad waqti badan qaadan off, hadal waaxda khayraadka aadanaha. Sharax dib aan soo socda ma ahaa aad doorato. Sidoo kale la hadal HR for takoor kale oo la xiriira uurka.
Haweenka shaqada guulaysan karo!
Haweenku waa ku dhowaad nus ka mid ah shaqaalaha ee dalka Mareykanka. Taas macnaheedu waxa weeye waxaad tahay qayb aad u muhiim ah oo dhaqaalaha. Waxaad la kulmi karaan dhibaatooyin gaar, laakiin haweenka shaqada weli ku guulaysan karo. Haddii aad aragto in qof dumar ah oo la takooray, ha ka baqin inaad wax sheegto. Bixiyaan si ay caawimaad haddii ay suuragal tahay iyo haddii ay amaan tahay in aad sidaa sameeyaan. Waxaa muhiim ah in haweenka shaqada midba midka kale caawiyo.
Raadi gargaar sharci la FindHello
qaxootiga hore ee Sophia Vuelo noqdo xaakin horeysay Hmong-American ee Minnesota
Cristina Martinez muujinaysaa waxa muhaajiriinta aan la diiwangelin miiska soo